ပြင်ဆင်ထားသော 20ft Shipping Container Warehouse မလိုအပ်ပါ
40ပေ Modified Secondhand သင်္ဘောကွန်တိန်နာရှုခင်းLရိယာ Lounge
Wooden Look Prefabricated House ဟိုတယ်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး Prefab House Residence အထပ်နှင့်အတူကြမ်းခင်းအခြေအနေအတိုဖော်ပြချက် Humanized design, အမျိုးမျိုးသောအသွင်အပြင်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအာကာသ, အားကြီးသောအလိုက်အထိုက်နေတတ်, မြေယာအားလုံးပုံစံမျိုးစုံအဘို့အသင့်လျော်. Prefab အိမ်ကိုလည်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်. လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည်သစ်သားပုံစံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအိမ်…
ရေချိုးခန်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသောမီးခိုးရောင်ပုံသေသပ်စွာထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာအရွယ်အစားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း. ဂဟေဆော်ရန်မလိုအပ်ပါ. screw နှစ်ခုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ. ရိန်းမလိုအပ်ပါ. ကိုယ်တိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည် - 6*3*2.8မီတာ. အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်. စံအရွယ်အစားသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရေအတွက် ...
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်ချည်းထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာအဆောင်2အလွှာတိုဖော်ပြချက်လွယ်ကူသောစည်းဝေးပွဲကို. ဂဟေဆော်ရန်မလိုအပ်ပါ. screw နှစ်ခုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ. ရိန်းမလိုအပ်ပါ. ကိုယ်တိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည် - 6*3*2.8မီတာ. အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်. စံအရွယ်အစားသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရေအတွက်က 20GP ဖြစ်ပါသည် - …
Fast Assembly Flat Packed Container Design2Short Description Easy assembly. No welding required and connect with screws. Need crane to handle the container and lift the roof. The roof and bottom of flat packed container are ready made. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည် - 5.8*2.25/2.5*2.8မီတာ. Size can be…
Fast assembly flat packed container design 1 Short Description Easy assembly. No welding required and connect with screws. Need crane to handle the container and lift the roof. The roof and bottom of flat packed container are ready made. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည် - 5.8*2.25/2.5*2.8မီတာ. Size can be…
အသစ်ဂဟေဆော်ကွန်တိန်နာ Country House
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဂဟေဆက်ကွန်တိန်နာ Country House Container ကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒါ ...
Country Container အိမ်ကွန်တိန်နာကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ဖြစ်လာပြီ ...
ကွန်တိန်နာအမြန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်ကွန်တိန်နာကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒီမှာရှိတယ်
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာရုပ်ရှင်ရုံပြတင်းပေါက်ကွန်တိန်နာကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒီမှာရှိတယ်
Zhaoqing Modular ဆေးရုံ၏ပထမ ဦး ဆုံးပြည်သူ့ဆေးရုံ
ရောဂါကူးစက်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက် Zhaoqing Modular ဆေးရုံကွန်တိန်နာဆေးရုံ၏ပထမဆုံးပြည်သူ့ဆေးရုံ, အမိုးအကာဆေးရုံများနေရာတိုင်းမှာတည်ဆောက်နေကြသည်. အမိုးအကာဆေးရုံသည်ဖြည်းညှင်းစွာထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာဖြစ်သည်. ထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာသည်အမြန်တပ်ဆင်ထားသည်. ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြီးစီးပါပြီ 31 ထဲမှာကွန်တိန်နာ 10 ရက်ပေါင်း. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ခွန်အားကြီးမားသည်။